Global Voices teny Malagasy » Marcus Garvey sy Ilay Fotoana Fanararaotra Nodinganin’ny Filoha Obama · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2017 20:22 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Avaratra, Karaiba, Etazonia, Jamaika, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Ny Tetezana - The Bridge
i Marcus Garvey tamin'ny 1924. SARY: Sehatra ho an'ny daholobe avy amin'ny Tranombokin'ny Kongresy.
Avy amin'i Geoffrey Philp
Namoaka famelankeloka prezidansialy 212 sy fanenàn-tsazy 1715 ny filoha Barack Obama nandritra ny fotoam-pitondrany, saingy nolaviny kosa ny hanao sonia famelankeloka prezidansialy ho an'ilay Tena Mendri-kaja Marcus Mosiah Garvey, Maherifo Nasionaly avy any Jamaica (1887-1940). Izany dia ankoatra ireo fiangaviana avy amin'ny Kongresin'ny Komitim-pifidianan'ny Mainty, izay ahitana ireo zokiolona tao anatin'ny hetsika ho an'ny zon'olombelona tahaka ny Solombavambahoaka John Conyers, John Lewis ary i Charles Rangel, ary koa ireo praiminisitra Jamaikana taloha sy ankehitriny , ny zanaka lahin'i Garvey, Dr. Julius Garvey , ary mpikatroka mafana fo an'arivony manerana izao tontolo izao. 
Voaheloka tsy fidiny ho nanao hosoka taratasy tamin'ny 1923, namita roa taona sy tapany tao amin'ny Fonja Federalin'i Atlanta talohan'ny fanenàn-tsazy nomen'ny Filoha Calvin Coolidge tamin'ny 1927 i Marcus Garvey. Taoriana ezaka maro mba hahazoana famelankeloka prezidansialy, ny voalohany izay natombok'i Garvey izy tenany, nampitsiry fanantenana ny fahalanian'ny Filoha Obama fa ho tanteraka amin'izay ny ezaka fanadiovana ny anarana tsaran'i Garvey.
Tao anatin'ny Nofin'ny Raiko, naneho ny fahatsiarovany tena mikasika ny tsanganan'i Garvey ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Pan-Afrikana ny kandidà senatorialy Barack Obama, rehefa nanonona iray tamin'ireo andianteny voasonian'i Garvey izy, ”Mitsangàna ianareo ry mahery firazanana!” Nadikan'ny mpanohana maro an'i Garvey ho toy ny famantarana izany fa mety hanova ny politikan'i Etazonia manandrify an'i Garvey sy ireo mainty maro hafa i Obama, izay ny hetsika nataony dia nampangain'ny Biraon'ny Fanadihadiana (mpialoha lalana ny FBI) ary ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana.
Nisy famantarana maro hafa ihany koa fa, ny Filoha Obama, izay tia maka ny teny fanambaràn'ny Dr.Martin Luther King ”Lava dia lava ny renitsipiky ny fitondrantena erak'izao tontolo izao, saingy mitongilana mankany amin'ny rariny izany,” dia nino ny soatoavina izay nanaovan'i Garvey sy i King sorona ny ain'izy ireo. Nandritra ny fotoam-pitondrany, toy ny nomarihan'i Ta-Nehisi Coates, nananatra matetika ny fiarahamonina mainty ny filoha Obama mikasika ny filàna ny fianarana sy ny firaiketana amin'ny soatoavina mikasika ny fiasana mafy sy ny fizakantena. Ary iza no nanome aina ireny idealy ireny tsara kokoa noho i Marcus Garvey?
Tonga tany Amerika toy ny mpifindra monina tena mahantra i Garvey tamin'ny 1916, ary niafara tamin'ny fanovàna ny fomba fisainan'ireo mainty mikasika ny tenany. Araka ny Tambajotra Black Business, ” i Garvey sy mpikambana 13 no namorona ny UNIA tamin'ny 1917, izay tamin'ny 1921 dia nanana mpikambana erantany mihoatra ny valo tapitrisa. Nanorina gazety izy, ny Tontolon'ny Mainty, izay tamin'ny fara-tampony dia nanana fivezivezena isan-kerinandro maherin'ny 500.000; fandefasana tamin'ny alàlan'ny sambo, ny Black Star Line, izay folo tapitrisa dolara no masonkarena tamin'ny fampiasam-bola taminy; Ny Fikambanan'ny Orinasa Mainty, izay niteraka vola miditra sy nanome asa tamin'ny alalan'ny orinasa maro, anisan'izany ny andianà toeram-pivarotana sy trano fisakafoanana, ny fanasan-damba amin'ny entona, trano fanjairana sy fivarotana akanjo, trano fivarotana satroka, trano famoahamboky sy orinasa mpanamboatra saribakoly. Ao New York renivohitra irery, nanana trano maromaro i Garvey, andiana kamiao, ary nampiasa mpiasa mainty maherin'ny 1000 isa. Marcus Garvey, ”ilay anjely maintin'ny fahombiazana”, dia nanome maodely voaporofo ho an'ny fanavotana ny Afrikana tao an-toerana sy tany ivelany.
Toy ny olona izay mirehareha ny tenany amin'ny fahazoan-dalany hampianatra, tsy nahatratra ny fotoana fanararaotra nahafahany hanao adihevitra marina mikasika ny firazanana sy ny famafàna ireo maherifo mainty ao amin'ny saintsika rehetra miaraka amin'ireo vahoaka Amerikana ny Filoha Obama. Justin Hansford, mpisolovavan'ny fianakaviana Garvey, dia niantso izany ho toy ny ”fotoana azo ampianarana,” izay tokony mba nampisehoan'i Obama ny fomba namoahan'ny zava-bitan'i Garvey ny vahoaka mainty tao anatin'ny fahantrana ary nametraka azy teo amin'ny anjaran'ny fizakantena sy ny fandraharahana. Filoha Obama, amin'ny maha mpitarika ara-politika azy eo anivon'ny vondrona Pan-Afrikana, dia afaka mba nanome fijery mifototra tamin'ny asan'i Garvey—fanorenana filozofika—izay tokony niasa toy ny tohan-drindrina manohitra ny fanafihana azo novinaniana nataon'ny fitantanana vao hiditra, ny zo sivily sy ny maha-olombelona.
Nisafidy ny hangina ny Filoha Obama, noho izany tavela miaraka amin'ny fanontaniana isika. Tsy nahalala mikasika ny taratasy nosoratan'ny Dr. Julius Garvey izay hanolorany hevitra mikasika ny fahatakarana mivelatra kokoa ny asan'ny rainy ho toy ny mpitarika Pan-Afrikana ve ny Filoha Obama, izay niresaka an'i Garvey ho nasionalista fotsiny ao anaty Nofinofy? Sa natahotra ny filoha fa raha namela heloka an'i Garvey izy dia mety ho raisina ho toy ny fitiavana sy fiahiana ny mainty ao Amerika ary, raha hitarina, famatorana an'i Amerika, na inona na inona firazanana sy fivavahana? Mety natahotra ve ny Filoha Obama fa ho voaloton'ny resaka radikalisma ny lova navelany? Tsy ho fantatsika mihitsy izany.
Zavatra iray anefa, na izany aza, no azo antoka: na eo aza ireo zava-bitany deraina sy manan-danja, raha mbola mitoetra ny fahatsiarovana an'i Marcus Garvey dia tsy ho adino mandrakizay ny tsy fahombiazan'ny Filoha Obama hampanara-dalana izay safidy moraly mazava.
Geoffrey Philp no mpanoratra ny Matoatoan'i Garvey; hita saika isaky ny fitambaram-boky lehibe mirakitra boky sy gazety ao anatin'ny literatiora any Karaiba ny asany. Ankehitriny dia miasa amina fanangonana tononkalo izy, ”Taratasy avy amin'i Marcus Garvey.” Mipetraka any Miami ary mampianatra teny Anglisy ao amin'ny Tobim-pianarana Iraisan'ny Amerikana ao amin'ny Kolejin'ny Dade ao Miami.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/28/95639/
 Kongresin'ny Komitim-pifidianan'ny Mainty,: http://justice4garvey.org/wp-content/uploads/2016/11/16.10.13-Letter-Marcus-Gavey-pardon-request-to-President-Obama.pdf
 praiminisitra Jamaikana taloha sy ankehitriny: https://www.democracynow.org/2016/12/22/part_2_marcus_garveys_family_asks
 zanaka lahin'i Garvey, Dr. Julius Garvey: http://www.cnn.com/2016/11/22/opinions/marcus-garvey-should-have-a-presidential-pardon-garvey/
 mpikatroka mafana fo an'arivony manerana izao tontolo izao.: http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/18/activists-ask-president-obama-for-posthumous-pardo/
 Tambajotra Black Business, : http://www.buyblackmovement.com/MarcusGarvey/index.cfm